Home AMERIKANINA STARS Ny tantaran'i Lionel Messi Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Lalao Football iray izay fantatra indrindra amin'ny anaram-bosotra hoe "The Flea". Ny tantaran'ny tantaram-pahalehibonantsika Lionel Messi sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao hatramin'ny fotoana nahaterahany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ny tantaram-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana.
Eny, fantatry ny rehetra ny fifanandrifian-taona nandritry ny taona C Ronaldo. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Lionel Messi izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Lionel Messi dia teraka tamin'ny andro 24 tamin'ny 1987 Xunum tao Rosario, Arzantina. Izy no fahatelo tamin'ireo ankizy efatra naterak'i Celia Cuccittini reniny (mpanadio) ary ny rainy Jorge Messi (mpiasa amin'ny orinasa an-tanàn-dehibe).
Young Messi, izay Italiana sy Espaniôla-Espaniôla avy amin'ny rainy sy ny italiana italiana tamin'ny reniny, dia nihalehibe tany Rosario, niaraka tamin'ireo zokiny zokiny Matias, Rodrigo sy Maria Sol, zandriny vavy.
Nampiseho fahalianana voalohany tamin'ny baolina kitra izy tamin'ny nilalaovana ny fanatanjahantena tamin'ireo zokiny lahy sy zandriny; Maximiliano ary Emanuel Biancucchi (mpilalao baolina matihanina ankehitriny).
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Ilay Vehivavy Nahita ny ho avy i Messi
I Messi dia efa antitra 4 rehefa nahita an'i Celia, renibeny, ny fananganana kintana baolina kitra tao aminy. Izy irery no hany fotoana naniriana hahita an'i Messi ho mpilalao baolina kitra ary nahatonga ilay zaza ho any amin'ny fivoriana fampiofanana amin'ny baolina kitra voalohany tao amin'ny fikambanan'ny baolina kitra any Grandoli, ary nanasokajy azy ireto teny ireto:
"Indray andro, ianao no mpilalao baolina kitra indrindra eran-tany"
Ny renibeny lehibe Celia dia nanohana azy fa tsy vitan'ny hoe nandresy lahatra ny ray aman-drenin'i Messi izy mba hividy ny baoliny baolina kitra voalohany voalohany, fa izy kosa nandrafitra ny mpanazatra ny klioba teo an-toerana ary tafiditra ao anatin'izany ny zafikeliny. Indrisy, maty i Celia raha i Xenum taona efa antitra i Messi, kanefa nankalaza ny fahatsiarovany izy tamin'ny nananganany ny tanany tany an-danitra isaky ny mamaly.
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Ilay tovolahy tsy nitsaha-nitombo
Fotoana fohy taorian'ny nahafatesan'ny renibeny i Messi, dia hitan'ny ray aman-dreniny fa nijanona tampoka izy rehefa ampitahaina amin'ny namany. Ny ray aman-dreny niteraka an'i Messi dia nitondra azy tany amin'ny dokotera iray izay nanambara fa mijaly noho ny tsy fahampian'ny hormone izy. Toe-javatra iray izay midika fa hampitombo ihany izy raha mitantana fitsaboana manokana izay mitentina $ 1,500 isam-bolana amin'ny fotoana.
Ny ray i Messi dia tsy afaka nanakalo ny vidin'ny fitsaboana azy ary vokatr'izany dia nitady fanampiana avy amin'ny Newell's Old Boys, klioba izay nilalaovan'ny baolina kitra nandritra ny fotoana. Ny klioba dia nanolotra fanampiana kely ary i Jorge Messi dia nitady fomba hitantanana ny fitsaboana. Ny fianakaviana dia nanan-java-nisongadina noho ny fahatsapana ny fahatsiarovan-tena rehefa noraisin'ny klioban'i Buenos Aires i Messi River Plate. Na izany aza, ny klioba dia tsy nety nanarona ny fandaniana ara-pitsaboana an'i Messi.
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Barcelona To The Rescue
Tonga tamin'ny fotoana farany ny Succor FC BarcelonaTale ara-teknika, i Charly Rexach dia naheno tantara momba ny tanora tanora 13 iray taona izay nanana talenta toy izany tamin'ny mpilalao baolina kanto Argentiniana Diego Maradona. Tsy nanam-potoana ny handefa ny tolotra ho an'ny fianakavian'i Messi ny talen'ny tale raha toa ka nandalo fitsarana ny zatovo talenta (izay efa nataony) ary mipetraka ao Espaina.
Izany no nitranga tamin'ny fifindra-monin'i Messi niaraka tamin'ny rainy manerana ny ranomasimbe Atlantika mankany Espaina. Rehefa tonga i Messi, dia nanolotra ny tenany ho ao amin'ny klioba, mampiaiky volana an'i Charly Rexach izay nanara-maso akaiky ny fomba hahafahan'ny zatovo madinika handamina baolina. Avy eo dia natolony an'i Messi ny fifanarahana iray nosoratana tamin'ny taratasy napetraka!
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Progress Through Ranks
Raha mbola tao amin'ny rafitra momba ny académie de FC Barcelone, i Messi dia zazalahy iray mangina izay diso hevitra tamin'ny voalohany noho ny hafahan'ireo mpiara-mianatra azy. Na dia ny trano fonenana aza, dia nanangana ny tenany ho toy ny mpilalao ara-boajanahary izy, izay manana tsindrin-tsakafo tsara. Ny fahazarana ao anatin'io fotoana io dia ahitana fampiofanana mandritra ny andro, ary ny fitomboan'ny hormones amin'ny fitomboan'ny ratra amin'ny tongony amin'ny alina.
Nitohy ny fahazarana raha mbola nandroso tamin'ny asan'ny klioba i Messi ary afaka nitombo ho azy tamin'ny taona 16 tao 2003. Izy no nandray anjara voalohany tamin'ny ekipa FC Barcelona voalohany tamin'io taona io nandritra ny fifankatiavana José Mourinho's Porto. Ny fahombiazan'ny fampisehoana nataony tao anatin'ilay lalao dia nahazo mari-pankasitrahana tsara avy amin'ireo mpanao fanatanjahantena ara-panatanjahantena, raha toa kosa ny mpilalao sarimihetsika Barça (tamin'izany fotoana) Ronaldinho dia niresaka be momba ny talentan'i Messi izy ary nahalala azy.
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Mitsangàna mba haka izany
Ny asan'i Messi tany Barcelone dia nahazo tsaratsara kokoa sy tsara kokoa nandritra ny taona maro ary nahatratra ny laharam-pahamehana rehetra nandritra ny fotoana 2008-09 raha nanampy an'i Barcelona izy tamin'ny voalohany treble tao amin'ny baolina kitra Espaniola, fivoarana izay nahitan'ny maro hafa azy nandresy ny Ballon d'Or sy ny World Player of the Year fony izy 22 taona. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Relationship Life
Efa ela dia efa nanambady ny renim-pianakaviana antsoina hoe Antonella Roccuzzo i Messi.
Na dia nifankahalala aza ireo mpivady hatramin'ny taona 5, dia 8 taona vitsy monja taorian'izay dia nihaona tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny Lucas Scaglia, zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Antonella sy namana akaiky an'i Messi.
Nifandray hatrany ireo tantsaha lovia raha nanangana asa tany Espana i Messi mandrapahatongan'ny 2008 rehefa niaraka taminy tany Barcelone. Izy ireo dia nanambady 9 taona maro taty aoriana taorian'ny niterahany zazalahy roa.
Mandroso haingana dia haingana ny fifandraisana misy amin'izy telo lahy, Thiago Messi (teraka tamin'ny volana novambra 2, 2012), Mateo Messi (teraka 15 2015, 10) ary Ciro Messi (teraka 2018, XNUMX).
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Natao ho mpikambana ao amin'ny 6 i Messi, mitondra antsipiriany momba ny fianakaviany manampy ianareo.
Momba ny Rain'i Messi: Ny rain'i Messi Jorge Messi, dia teraka tao 1958. Niasa tamina orinasa vy izy talohan'ny nanaiky ny anjara asan'ny mpanazatra iray Grandoli eo an-tanàna football any Grandoli. Jorge, izay nifikitra tamin'ny zanany tamin'ny alàlan'ny matevina sy matevina ankehitriny, dia mpikarakara ny asany, anjara andraikiny nandritra ny am-polo taona.
Momba ny renin'i Messi: Ny renin'i Messi, Celia Cuccittini, dia niasa ho toy ny fotoana fanadiovana ary dia akaiky kokoa ny zanany farany. Manampy amin'ny fitantanana ny fototra iorenany izy amin'izao fotoana izao.
Momba ny Rahalahy Messi: Nahafinaritra an'i Messi ny orinasa zokin'ny zokilahy roa izay nitombo nilalao baolina kitra. Anisan'izany; Rodrigo Messi sy Matias Messi.
Rodrigo Messi teraka tamin'ny 10th of February 1980 dia mitantana ny fandaharam-potoanan'i Messi isan'andro sy ny dokambarotra.
Matias Messi (teraka Jona 23, 1982) dia mpilalao baolina matihanina ihany koa izay miandraikitra ny Lionel Messi Foundation. Tao amin'ny 2016 izy dia tratran'ny basy tsy ara-dalàna ary nasaina nampianatra kilasy baolina kitra tao an-tanindrazany nandritra ny taona iray manontolo.
Momba ny Rahavavy Messi: I Messi dia manana rahavavy tanora iray ao amin'ny Maria Sol Messi. Ny hany vehivavy mpiray tam-po tamiko dia nihalehibe toy ny mpanjakavavin'ny zokiny lahy.
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Zon'olombelona aorian'ilay anarana
I Messi dia manana anaram-piantsoana mahaliana roa izay notanterahina nandritra ny taona maro niasany. Anisan'izany ny "Messidona" sy ny "La Pulga". Izy no anarana nomeny anarana hoe Messidona taorian'ny tanjona mahavariana nanohitra an'i Getafe tao amin'ny 2007 Copa del Rey semi-final. Ny tanjona dia heverin'ny maro ho mitovy amin'ny an'ilay izy Maradona no nahatonga an'i Angletera tany amin'ny World Cup 1986.
Amin'ny lafiny iray, i Messi dia fantatra amin'ny anarana hoe "La Pulga", teny Espaniola izay midika hoe "The Flea". Eny, i Messi dia toy ny parasy iray, mpiaro kely sy mahamenatra. Ao amin'ny faritra sasany dia fantatra amin'ny anarana hoe "The GOAT" izy io, izay midika hoe The Greatest of All Times.
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Tattoos
Messi tsy misy latsaky ny 7 Tattoos no ahafahantsika mampiditra anao ny dikany ao ambadik'ireo loko amin'ny legiona baolina kitra. Manomboka eo amin'ny vatany ambony dia Tatoo ny reniny be fitiavana any an-damosiny, marika ny hamaroany azy.
Manana tatoazy an'i Jesôsy (1) izy amin'ny triceps momba ny fiorenany ara-pinoana. Toy izany koa, ny fiangonana katolika romana any Barcelone dia mibaribary eo amin'ny sandriny havanana miaraka amin'ny voninkazo lotus voatokana (2) ary ny varavarankely mihetsika ao amin'ny trano fiangonana ( 3). Ny voninkazo lotus dia maneho fa ny talenta dia afaka mitombo na aiza na aiza manohitra ny fahasamihafana rehetra raha toa kosa ny ravin-tsofin'ny fiangonana malaza Barcelone Sagrada Familia dia maneho ny fitiavany ho an'ny tanàna.
Farany, ny tongony havia dia rakotra manontolo amin'ny ranomainty tsy mazava, afa-tsy amin'ny isa 10 izay isa Number Jersey.
Ny tantaran'ny Lionel Messi Childhood Plus untold -Ny fiainan'ny tena manokana
Lionel Messi dia tia olona tsy misy fepetra amin'ny olona an-tapitrisany maneran-tany noho izy milalao ny lalao amin'ny maso eo amin'ny tanjony, na inona na inona horonantsary tsy misy dikany atosaka aminy. Noho izany, izy dia ohatra iray fakan-tahaka momba ny fikirizana, ny fanoloran-tena ary ny fisian'ny fisainana.
Ankoatra izany, izy dia manetry tena sy midina eto an-tany izay tsy milalao laza, fa milalao mba hanehoana ny tenany. Ny anjara biriny ataony ho an'izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa amin'ny alàlan'ny "Lionel Messi Foundation" dia tsy azo resena lahatra.
Lavitry ny Filantrophie izy dia Ray be fitiavana sy vady tsara. Ilaina ny milaza fa i Lionel Messi dia sokajin'ireo legioma velona izay tsy dia mahasambatra taranaka.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'I Lionel Messi momba ny tantaram-piainana malaza momba ny tantaram-piainana tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Abid Iqbal 3, 2017 Amin'ny 4: 31 hariva
lionel messi no mpilalao baolina kitra tsara indrindra eran-tany. Izaho koa dia mpankafy ny lioniel lionel ary toa tahaka azy satria ny mpilalao voalohany dia lionel messi. Mizara lahatsoratra lehibe momba ny lionel messi ianao. Misaotra ny fizarana
Desambra 1, 2017